Home » Lahatsoratra farany farany » Tourism » Ny politikan'ny fiaramanidina dia sekretera vaovao misahana ny fitaterana any Etazonia no tokony hanaraka » Page 2
Ary matoky tena ve ianao dieny izao fa hampiharina ho lalàna ny fanitarana ny karama? Ary ahoana no fiasan'izany amin'ny mpikambanao, ary firy amin'izy ireo no tena tsy miasa nefa tsy karama? Sa sarona daholo?
Ka manarona ny rehetra izany. Ny programa dia tena… eritrereto ho fomba iray hafa amin'ny tsy an'asa. Ka izany dia mitovy amin'ny programa efa hitanao tany Eropa izay omen'ny orinasa vola avy amin'ny governemanta hitazomana ny olona handray karama. Ary vahaolana tena tsara izany satria ao anaty krizy dia te hanana vahaolana tsotra betsaka araka izay tratra ianao. Ka manana rafitry ny karama amin'ny zotram-piaramanidina izahay. Raiso, ohatra, ny United Airlines miaraka amina mpiasa 80,000. Raha manana mpiasa 80,000 ianao manatona ny governemanta ary miteny hoe: “Tsy afaka manofa trano aho, tsy mahavita mandoa vola.”
Na mifanerasera amin'ny kaompaniam-pitaterana iray ianao ary mahazo ny vola amin'izy ireo, tohizo ny rafitra fandoavam-bola, alao antoka fa mahazo karama ny tsirairay, mijanona amin'ny fitsaboana azy ireo, izay tombony fanampiny any Etazonia satria tsy rakotry ny governemanta federaly izany. . Ary tazominay koa ny fotodrafitrasan'ireto seranam-piaramanidina ireto. Ka ity programa ity manokana, ireo no hevi-dehibe amin'izany. Nanome vola fanampiana an'ireo zotram-piaramanidina ny governemanta mba handoavana ny karama sy ny tombotsoany fotsiny ho an'ireo mpiasa ary hitaky ny tsy hanilihana ireo mpiasa ireo. Voalaza ao koa fa tsy misy fihenam-bidy isaky ny ora.
Ka tsy te handrava asa tsara izahay mandritra io areti-mandringana io koa. Ary voalaza ihany koa fa ny serivisy dia tsy maintsy mitohy amin'ireo vondrom-piarahamonina rehetra izay notompoinay taloha mba hitazomana anay ireo fotodrafitrasa tena lehibe. Ny tombotsoan'ny programa dia ny fitazonana ny olona amin'izao fotoana izao, ny fitazonana ny vahoaka, satria ny fotodrafitrasan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia ny fiaramanidina sy ny zotra, saingy ireo olona miasa ireo fiaramanidina ireo ihany koa, ary manidina ireo fiaramanidina ireo, ary mikarakara ny mpandeha amin'ireo fiaramanidina ireo. Ka dia mitazona izany rehetra izany izahay mandritra ny fotoana rehetra.
Ary, Sharon, mahazo aina ve ianao amin'ny valin'ny federaly manoloana ny areti-mandringana amin'ny lafiny ara-bola? Azo antoka fa tonga nanampy izy ireo, toa ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ary maro no hiady hevitra mihoatra noho ny governemanta hafa manerantany. Ary kudos ho anao amin'ny ezaka ataonao hahazoana ny fanampiana avy amin'ny Kongresy.
Eny tokoa, ezaka niaraha-niasa io, ary tianay ny misaotra an'i Sara noho ny fitarihany tamin'ny programa fanohanana karama. Ary nahavita asa tsara izy, araka ny eritreritro, nanoritra ny tombotsoan'ny programa ary azo antoka fa tena manohana an'izany izahay. Satria fantatrao, Ken, nanana ny taona ratsy indrindra teo amin'ny tantarantsika tamin'ny taon-dasa isika. Very 32 tapitrisa dolara izahay. Ary ny hakanton'ilay programa PSP dia mandeha tokoa, lahasa mivantana ho an'ireo mpiasanay, izay mahafinaritra. Saingy mba hiatrehana ny areti-mandringana, ny mpitatitra dia tsy maintsy nanao izay nantsoiko hoe fanapahana lafo be. Ary noho izany dia nanao fepetra an-tsitrapo be izahay, fisotroan-dronono aloha, fivarotana. Amin'ny maha indostria azy azy, raha toa ka mbola nitotongan'ny 20% ny mpitatitra mpandeha.
Nandao ny 20% tamin'ny asanay izahay tamin'ny taona lasa. Ary toa an'i Sara nilaza, ny tiako holazaina dia asa tsara ireto. Asa be karama ireto. Noho izany dia tena te-hiditra amin'ny toerana tena hirosoana izahay ary manantena fa hitandrina tsara miaraka amin'ilay vaksiny, miaraka amin'ny fanohanana PSP mitohy, miaraka amin'ireo fepetra marobe napetraka napetrany… Ny zotram-piaramanidina no nitarihinay amin'ny voalohany mila maska, avy eo manao fampiharana hentitra. Ankehitriny dia manana mandat federaly izahay, izay heveriko fa hanakianana amin'ny lafiny fahafahan'ny governemanta mampihatra sy manombana ny sazy. Tena hanisy fiovana izany. Saingy noho izany dia nitarika ny fepetra momba ny sarontava izahay.
Page 2 ny 10 Prev Manaraka